Ayikho imali yokuqeqesha abahlengikazi abangu-700 | News24
Ayikho imali yokuqeqesha abahlengikazi abangu-700
Johannesburg – Ukungahleli kahle kanye nenkinga yezezimali emnyangweni wezeMpilo kuzokwenza kube nzima ukuqeqeshwa kwabantu abangu-700 abazokwenza unyaka wabo wokuqala befundela ubuhlengikazi, kusho okhulumela iDA kwezempilo eGauteng uJack Bloom.
"Akwamukelekile ukuthi kuphazamiseke ukuqeqeshwa kwabafundi abatholakale befanelekile ukufundela lomsebenzi," kusho uBloom.
Uthi uyazwelana nabafundi abebecasuke begane unwabu behlanganyele ngaphandle kwamasango amakolishi obuhlengikazi eChris Hani Baragwanath nase-Ann Latsky ngoMsombuluko.
OLUNYE UDABA:Ungqongqoshe ubize amanesi “ngosathane abagqoke ezimhlophe”
UBloom uthe uNgqongqoshe wezeMpilo kulesi sifundazwe uGwen Ramokgopa kumele axolise kakhulu ngale nkinga futhi amemezele usuku lapho kuzoqalwa khona ukufuna.
NgoLwesibili ekuseni uLesemang Matuka okhulumela lo mnyango umemezele ukuthi ngeke bakwazi ukuqala uhlelo lokuqeqwsha abahlengikazi emakolishi abo.
"Ngenxa yesimo esingesihle sezimali, sibone kungcono ukuhlehlisa ukuqala kwezifundo kulabo abenza unyaka wokuqala kuphela. Sizobona kahle ukuthi isimo sihamba kanjani ngokuqala konyaka wezimali nokuyilapho sizoxhumana nalabo abebekhethiwe ukuthi bangenza unyaka wabo wokuqala," lawa ngamazwi kaNgqongqoshe uRomokgopa ngoMsombuluko.